माटोको लवणता को तटस्थीकरण - जर्नल "आलु प्रणाली"
फोटो १. एग्रीफुलको आवेदन
Ekaterina Kudashkina, कृषि विज्ञान को उम्मेदवार
पानी र माटोको लवणीकरण यी आधुनिक बाली उत्पादनमा गम्भीर चुनौतीहरू हुन्। एफएओको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०५० सम्ममा विश्वको ५० प्रतिशत कृषि भूमि लवणताबाट प्रभावित हुनेछ । माटोको क्षारीकरण भनेको माटोको घोलमा घुलनशील लवणको अत्यधिक मात्रामा जम्मा हुनु हो, जसले प्रजनन क्षमतामा कमी ल्याउनु हो। मूलतः, यो माटो क्षरण को बारे मा छ। लवणको उच्च एकाग्रताले मुख्यतया बिरुवाको जरा प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस तथ्यको कारणले गर्दा माटोको बाह्य आसमोटिक दबाब बिरुवा भित्रको ओसमोटिक दबाबको सापेक्ष उच्च हुन्छ, बाहिरबाट पानी र पोषक तत्वहरू अवशोषित गर्ने बिरुवाहरूको क्षमता घट्छ, र तिनीहरूको कमी हुन्छ - राम्रोसँग ओसिलो माटोमा पनि।
नुनिलो माटोमा, सोडियम क्यासनको उच्च सांद्रताले बिरुवाको जीवनका लागि आवश्यक क्याल्सियम र पोटासियमलगायत अन्य क्यासनहरू जम्मा हुनबाट रोक्छ। Na को उच्च एकाग्रता+ र/वा Cl- प्रकाश संश्लेषणलाई रोक्छ। क्लोराइड सलिनाइजेशन बिरुवाहरूको लागि सबैभन्दा खतरनाक मध्ये एक हो।
लवणताले बिरुवाको बृद्धि र विकासलाई सबै चरणहरूमा असर गर्छ, अंकुरणदेखि परिपक्वतासम्म, तर विशेष गरी ओन्टोजेनीको महत्वपूर्ण चरणहरूमा। एक्सपोजरको नतिजा फरक हुन सक्छ: बिरुवाको आकारमा कमी देखि बिरुवाको पूर्ण मृत्यु सम्म।
समस्याको समाधान। लवणतालाई कृषि प्राविधिक र प्रजनन विधिहरूद्वारा सामना गर्न सकिन्छ। नुन सहिष्णुताका लागि कृषि बालीको छनोट भनेको लामो र महँगो बाटो हो, यो भविष्यको लागि हो, किनभने लवणताको समस्या आगामी वर्षहरूमा कतै हराउने छैन। कृषि प्राविधिक विधिले पुन: प्राप्ति प्रक्रियाहरू समावेश गर्दछ (उदाहरणका लागि, फस्फोजिप्समको प्रयोग आवश्यक छ, तर रसद र इन्धन र स्नेहकहरूको लागतमा भएको बृद्धिको सन्दर्भमा, एक धेरै महँगो कदम) र फर्टिगेशन (विभिन्न माटोको शीर्ष ड्रेसिंगको प्रयोग र प्रयोग। उर्वरकहरू जसले पानी र माटोको लवणता कम गर्न मद्दत गर्दछ, उदाहरणका लागि: म अक्सर ड्रिप सिंचाईको साथ अमोनियम नाइट्रेट वा फस्फोरिक एसिडको अभ्यासको साथ भेट्छु)।
आलुको अनुभवबाट: सतहको माटोको लवणीकरणको सामना गर्ने र सिँचाइ हुने क्षेत्रहरूमा अवस्था बिग्रनबाट जोगाउने उत्तम तरिका हो। उर्वरक एग्रीफुल प्लस को आवेदन संग fertigation। एग्रीफुल प्लस माटोको लवणतालाई बेअसर गर्ने तरल उर्वरक हो र फुलभिक एसिडमा आधारित रूट बायोस्टिमुलेन्ट हो।
हामीले रोस्तोभ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फार्महरू मध्ये एकमा औषधिको प्रभावकारिता स्पष्ट रूपमा देख्यौं।
Energia LLC यस क्षेत्रको प्रमुख उद्यम हो। यसले फसलको फराकिलो दायरा बढाउँछ, यसको आफ्नै प्रशोधन र पशुपालन छ। रोस्तोभ क्षेत्रको पूर्वको सुक्खा अवस्थामा पनि, खेतले जाडो गहुँको उपजको सन्दर्भमा नेतृत्व लिन्छ।
२०२० मा, आलु थपियो Agriful Plus (तयारीको pH - 4,7) बढ्दो मौसमको लागि5लिटर प्रति हेक्टेयरको दरमा प्रति ड्रप।
फोटो १. पानीमा एग्रीफुलको विघटन
2,5 लीटर / हेक्टेयर (एक ब्यारेल प्रति 1000 लिटर पानीमा घुलनशील र एक थोपा, फोटो 1 मार्फत लागू) को डोजमा बडिंग चरणमा पहिलो प्रयोग पछि, माटोको सतह डिसेलिनाइजेशन भयो। फलस्वरूप, ड्रिप सिंचाईमा नुनको दाग3दिनमा गायब हुन्छ।
प्रभाव तुरुन्तै देखिने थियो (फोटो 2)। बाँया पट्टि, चट्टानहरू बिल्कुल सफा थिए, र दायाँमा, नुन दागहरू उस्तै थिए।
फोटो २. एग्रीफुल प्लस (बायाँ) र यो बिना (दायाँ) पानी
माटोको बायोफिडिङ एग्रीफुल प्लस प्रति थोपाको दोस्रो र तेस्रो प्रयोग 1,25 लीटर प्रति हेक्टेयर अंकुरको अवधिमा थियो - फूल फुल्ने र फूल पछि, क्रमशः (फोटो 3)।
हाम्रो YouTube च्यानल "Agroliga" मा कृषिविद्-तरकारी उत्पादकको भिडियो समीक्षा उपलब्ध छ।
Agriful Plus का प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू के हुन्? औषधि 100% तरकारी मूल हो, यो एक पूर्ण जैविक उत्पादन हो।
यो हाम्रो उर्वर लाइनमा फुलभिक एसिड (25%) बायोफिडमा सबैभन्दा धनी हो।
फुलभिक एसिड जैविक माइक्रोफ्लोराको गतिविधि बढाउनुहोस् र जरा प्रणालीको विकास गर्नुहोस्। तिनीहरू माटोको आर्द्रतामा सजिलै घुलनशील हुन्छन् र मोनो- र डिभ्यालेन्ट क्यासनहरू (उदाहरणका लागि, के संग) संग गठन गर्न सक्षम छन्।+, Na+, NH4+, Shift2+, एमजी2+) पानीमा घुलनशील लवण, जसले माटोको नुनिलोपनलाई कम गर्छ र बिरुवाहरूले पोषक तत्वहरू राम्रोसँग अवशोषित गर्छन्। यद्यपि, अत्यधिक क्षारीय वातावरण (pH>10) मा, केही फुलभिक एसिडहरू क्याल्सियम र बेरियम आयनहरूद्वारा अवक्षेपित हुन सक्छन्। ट्राइभ्यालेन्ट क्यासनहरूसँग (Fe3+ र अल3+) फुलभिक एसिडले पानीमा घुलनशील जटिल यौगिकहरू अवक्षेपण वा बनाउन सक्छ, तर मैले व्यवहारमा यस्तो माटो वा पानीको पीएच कहिल्यै देखेको छैन। रोस्तोभ क्षेत्रमा पानीको उच्चतम पीएच देखियो - 8,5।
कृषि प्लस पनि समावेश छ betaines। तिनीहरूले ओस्मोटिक दबाव विनियमित र पोषक उपलब्धता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। थप रूपमा, बेटेन्सले जरा प्रणालीको पानी अवशोषित गर्ने क्षमता बढाउँछ, चरम उच्च र कम तापमानमा बिरुवाको प्रतिरोध बढाउँछ, र क्लोरोफिलको संश्लेषणलाई उत्तेजित गर्छ।
Polysaccharides ऊर्जाको स्रोत हो, यसले बोटको कोशिकाहरूमा पोषक तत्व र पानीको प्रवेशको डिग्री पनि बढाउँछ र ट्युबर र जराहरूको गुणस्तर सुधार गर्दछ।
सँगै, polysaccharides, भिटामिन को एक जटिल र जैविक पदार्थ को एक बढेको सामग्री (45%) Agriful Plus माटोको माइक्रोफ्लोराको विकास र उर्वरता पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। अवलोकनबाट, माटो खुकुलो भयो।
बढ्दो सिजनको लागि एग्रीफुल प्लसको सिफारिस गरिएको खुराक 5-10 लीटर/हेक्टर हो, जुन लागत-प्रभावी र प्रभावकारी छ। आलुमा पन्ना पोषण योजनाको संयोजनमा एग्रीफुल प्लसको प्रयोगको साथ फर्टिगेशनले आर्थिक विकल्पको सापेक्ष थप 4,7 टन प्रति हेक्टर बचत गर्न सम्भव बनायो। पाइलट प्लटमा BP-808 आलुको उपज 42,5 टन / हेक्टर थियो, र शुद्ध नाफा 42 रूबल / हेक्टर (लगानी बाहेक) थियो।
Agriful Plus लाई सतह सिंचाई अन्तर्गत पनि लागू गर्न सकिन्छ: हामीले यसलाई 2,5 l/ha को मात्रामा ठूलो-ड्रप नोजलहरू, 300 l/ha को काम गर्ने तरल प्रवाह दरको साथ प्रयोग गर्ने अनुभव गरेका थियौं, त्यसपछि पानी दिने मेसिन खोलियो। । यसरी, एक दिन बित्यो जबसम्म कार सर्कलको अन्त्यमा पुग्यो, र त्यहाँ कुनै जलेको थिएन।
संक्षेपमा, म फेरि एक पटक पाठकको ध्यान दुई महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा खिच्न चाहन्छु।
Agritecno तयारीहरू, Agriful Plus सहित, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरू Ecocert, OMRI छन्, जसले यी उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना पुष्टि गर्दछ। अर्गानिक खेती।
ड्रिप सिंचाईको साथ एग्रीफुल प्लसको प्रयोगले माटो पुन: प्राप्तिलाई प्रतिस्थापन गर्दैन। बढ्दो मौसममा माटोको नुनिलोपनलाई नराम्रो हुनबाट जोगाउने यो उत्तम तरिका हो। माटोको लवणीकरणको समस्याहरू योजनाबद्ध, एकीकृत र व्यवस्थित कामको आवश्यकता छ।
यस लेखमा, हामीले एग्रीफुल प्लस औषधिको कार्यको संयन्त्रको व्याख्या गर्ने प्रयास गर्यौं, किनभने केवल वैज्ञानिक रूपमा आधारित जानकारी र प्रमाणित परिणामहरू भएकोले, तपाइँ निश्चित उत्पादनहरूको पक्षमा सही छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
कृषि प्रविधि र प्रभावकारी अन्तरक्रियाको लागि एक अभिनव दृष्टिकोणको लागि हेड व्लादिमिर भासिलिविच बुख्तियारोभले प्रतिनिधित्व गरेको फार्मका कर्मचारीहरूलाई हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं।
Agritecno तयारीहरू प्रयोग गर्ने अनुभवको बारेमा थप लेखहरू वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ www.agroliga.ru मिडिया खण्डमा।
टैग: "एग्रोलिगा"Agriful Plusपानी र माटो को लवणीकरण
टाटर्स्तानमा, फ्रोस्टको कारण, रोपेको खेतहरू पुन: जाँच गरियो
चिनियाँहरूले टाटारस्तानमा मलको ठूलो उत्पादन खोल्ने छन